လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်လေးဦးကို အခမဲ့ယာဉ်စီးခွင့် ၊ ဆေးကုသခွင့် မန်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်မ? - Yangon Media Group
မန္တလေး၊ ဇန်နဝါရီ ၄ – မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် (၇၃) လမ်း၊ ငုရွှေဝါလမ်းထောင့်ရှိ မန္တလာသီရိဘောလုံးကွင်းတွင် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက် ၇ နာရီကကျင်းပသော နှစ် (၇ဝ) ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင် မန္တလေးမြို့နေ အသက် (၉ဝ) ကျော် လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်လေးဦးအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး ချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က အခမဲ့ယာဉ်စီးခွင့်၊ ဆေးကုသခွင့်၊ တစ်လ ရေ ၁၅ ယူနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ယူနစ် ၁၅ဝ အခမဲ့အခွင့်အရေးများအား ပထမဆုံး အကြိမ်ပေးအပ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နှစ်ပေါင်း (၇ဝ) အကြာ ပထမဆုံးအကြိမ် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ မမေ့မလျော့ဘဲ အသိအမှတ်ပြုစောင့်ရှောက် ခံရခြင်းကို အတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်မိကြောင်း၊ အခမဲ့အခွင့်အရေးများ ပေးခြင်းကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကြီးလည်း ဘေးရန်အပေါင်း မှ ကင်းဝေးပါစေ၊ ကာကွယ်နိုင်ပါစေကြောင်း အသက် (၉ဝ) ကျော် လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်လေးဦးတို့က ပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံဆောင် ရွက်ခဲ့သည့် အသက် (၉ဝ) ကျော် လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင်လေးဦး အား မော်တော်ယာဉ်အခမဲ့စီးနင်းခွင့်၊ ဆေးရုံကြီးတွင် အခမဲ့ဆေးကု သခွင့်အပါအဝင် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ တစ်လလျှင် ရေ ၁၅ ယူနစ်နှင့် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းမှ တစ်လလျှင် လျှပ်စစ်ယူနစ် ၁၅ဝ အခမဲ့အသုံးပြု ခွင့်တို့ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်က ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် နံနက်ပိုင်း လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင် ဂုဏ်ပြုပေးအပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
'ဂီတနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အားမရတာလည်း ရှိတယ်'' တေးသံရှင်/သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွ??
ယခုနှစ် ဆေးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အနိမ့်ဆုံးရမှတ် သတ်မှတ်ချက် ယခင်နှစ်ကထက် လျော့နည်းမည်